ROMANA 8.31-38	F. 4 | Fitandremana Ankadifotsy
ROMANA 8.31-38	F. 4
FAHAMARINANA TSY AZO HOZONGOZONINA
Andiana fanontaniana arahina valiny no namaranan’i Paoly ity fampianarana ato amin’ny toko fahavalo ity, manoloana izay fanahiana rehetra mety hitranga amin’ny zanak’Andriamanitra.
Momba antsika Andriamanitra (31-32). Ny Raintsika efa nanome ny Zanany hanafaka antsika amin’ny fanamelohana vokatry ny ota. Mbola omeny antsika koa ny zava-drehetra, izany hoe ny zava-drehetra izay ilaintsika mba hahafahantsika mahatratra ny tanjony ho antsika izay nofidiany. “Fahasoavana” izany. Andao hiroso amin’ny fandinihan-tena, raha te hahatratra ny tanjony ho ahy aho, tsaratsara kokoa ny mamantatra ny hoe “iza aho aloha?” (dans l’être), alohan’ ny hoe “inona no tokony hataoko?”(dans le faire). Io « iza aho » io no mamaritra izay ataonao.
Inona no hahasaraka ahy….? (33-35). Ho anao olomboafidin’Andriamanitra, misy miampanga ve ianao? misy manameloka? misy mitady hampisaraka anao amin’ny Fitiavan’I Kristy ve? Toy ny fanahiana, ny tsy fisiana na tsy fahampiana ara-bola sy ara-materialy, ny loza tampoka tonga toy ny sabatra, mety ho sabatra mamono ny maha- izy anao… mety ho mbola lava ny lisitra. Tolona tsy maintsy atrehina ireo, fa I Kristy tsy mandao anao mihitsy.
TSIA ry Jesoa Tompo tia anay...(36-38). Mazava ny valin’ny fanontaniana. Tsy misy fisalasalana no hitenenan’I Paoly fa tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra. Tano ho anao izany fahamarinana tsy azo hozongozonina izany. Mahereza, mifalia! Natao ihoarana ny sakana satria “manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” (37).